होमपेज / खेल / सडक दुर्घटना / दाङ दुर्घटनामा ५ को मृत्यु
दाङ दुर्घटनामा ५ को मृत्यु	06 Jan 2016 | 10:22am बुधबार २२ पुष, २०७२
Published in सडक दुर्घटना Read 895 times font size decrease font size increase font size Print Email Be the first to comment! 12345 (0 votes)
दाङ–दाङमा बुधबार विहान स्कुल बस र किया गाडी एकआपसमा ठोक्किदा मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक कुबेर कडायतका अनुसार अहिले सम्म ५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ। 'अहिले सम्म ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ घाइते छन्,'उनले नागरिकन्युजसँग भने, 'तर अहिलेसम्म तीन जनाकाे पहिचान भएकाे छ।' प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा काभ्रा ६ सल्यानका डेढ वर्षीय बालक हेमन्त श्रेष्ठ, दाङ त्रिपुर १ की ३६ वर्षीया सपना अन्सारी, र किया चालक मानपुर ७ का २० वर्षीय धनवहादुर थापा रहेका छन् । मृतक अन्य दुई महिलाको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।दाङको तुलसीपुर घोराही सडक खण्डको सौडिकुलामा रा १ क १९१ नम्बरको स्कुल बस र रा १ ज ३७२ नम्बरको किया गाडी जुधेका हुन्।
दुर्घटनामा परि घाइते २४ जना मध्य १२ जनालाई उपचारका लागि नेपालगन्ज रिफर गरिएको छ भने अन्य घाइतेको घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । उनीहरुको अवस्था सवैको गम्भिर रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बिकास देवकोटाले जानकारी दिए। मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरु कियामा सवार यात्रु रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विद्यार्थी लिन घोराहीबाट नारायणपुर तर्फ जाँदै गरेको पद्मोदय पव्लीक स्कुलको उक्त बसमा विद्यार्थीहरु नरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । Last modified onWednesday, 06 January 2016 14:50 Tweet More in this category:
भेरीमा बस खस्दा ३ को मृत्यु, ५० बढी बेपत्ता, गृहमन्त्रालयको उद्दार टोली घटनास्थलतर्फ (अपडेट १: ३०) »
देवेन्द्र बस्नेत देवेन्द्र बस्नेतLatest from